OMG! यी हुन्, करोडको रक्सीले नुहाउने महिला - Everest Dainik - News from Nepal
OMG! यी हुन्, करोडको रक्सीले नुहाउने महिला
एजेन्सीः पाकिस्तान मुलकी बेलायती अर्बपति मोहम्मद जुहरकी श्रीमती गायिका कमालिया जहौरको शौख सम्बन्धि केही प्रसङ्ग पस्किएका छौं । सुन्दैपनि तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर सत्य हाे । उनी नुहाउनका लागि मात्र प्रत्येक दिन २०–३० बोत्तल स्याम्पेन नामको रक्सी बाथटपमा खन्याउँछिन् । त्यो एक बोतल स्याम्पेनको बजार मूल्य कम्तिमा सात हजार रुपैयाँ पर्छ । यसलाई हिसाव गर्दा उनले नुहाउनकै लागि दैनिक कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँ खर्च गर्छिन् । यसलाई महिनाको हिसाव गर्दा करिव १ करोड हुन आउँछ ।
यतिमात्र होइन, कमालियाले आफ्नो शानसौकत देखाउनकै लागि २०/२२ जना काम गर्ने मान्छे राखेकी छिन् । जसको खर्च दुई करोड भन्दा बढि छ । उनी ६४ लाख रुपैयाँ पर्ने हिरा जडिएको घडी लगाउँछिन् ।
उनको विभिन्न स्थानमा १० वटा घर र प्राइभेट जेट छ । वार्षिक ६ लाख चस्मा र ३२ लाख रुपैयाँ जुत्तामा खर्च गर्छिन् । यतिमात्र होइन, एक रात बिताउनको लागि पेरिसको सबैभन्दा ठूलो होटेल सुट इम्पेरियल जान्छिन् र त्यहाँ ३५ लाख खर्च गर्छिन् ।
ट्याग्स: मोहम्मद जुहर